1. Intsimbi yeNkulumbuso- intsimbi eshushu ebushushu inyangi enobunzima obuphezulu ibonelela ngokusebenza okungagungqiyo xa usika kwaye uqhekeza izitena, ikhonkrithi kunye namanye amatye.
2. Iitopu ezibukhali- umphezulu ngokukodwa obukhali unika ngokwaphula ngokuqhubekayo izinto ezahlukeneyo zokwakha.
3. Isetyenziswa kakhulu- I-JS-TOOLS Iiselesi zinokusetyenziswa kwiindonga zezitena ezibomvu, iindonga zesamente, iindonga zegwebu, udonga lwezitena oluxubekileyo kunye nolunye udonga lwezitena. Ingasetyenziselwa ukumbiwa kwamatye kunye neendonga ukususa izinto ezibukhali.
● Ukusetyenziswa kwee-jackhammers zombane ze-SDS, ii-breakers okanye ihammer ezijikelezayo.
● Uhlobo lweShank: I-SDS Max
1. Ukudiliza isando sentsimbi senziwe ngentsimbi eyomeleleyo ukunciphisa ukophuka kunye nokubonelela ngobomi obude, ukukhutshwa ngokukhanya kunye nokusikwa kwethayile, udaka, iikhompawundi zokugaya, kunye nezinye iimveliso zokwakha.
2. Uyilo lwentsimbi oluqinisiweyo lumela ekusetyenzisweni nzima kwemihla ngemihla ekususeni ikhonkrithi, ukuqhekeka komphezulu onzima kunye nokusika.
3. Ubushushu buphathwe ngentsimbi yekhabhoni ephezulu yobunzima obufunekayo kunye nokuqina.
4.Ukuqiniswa ngokuchanekileyo kunye nobushushu ukuze iblade ingaphazanyiswa xa ibethwe kakhulu.
5. I-Universal SDS Max Shank- yomeleza i-SDS Max shank ifanelekile ngehammer ejikelezayo eyahlukeneyo ene-SDS Max chucks.
Inqaku / iGouge Chisel Amacwecwe ekhonkrithi Isebenza kakhulu
Iindonga zeBrick Red Isebenza kakhulu
Iindonga zesamente Isebenza kakhulu
Iindonga zamagwebu Isebenza kakhulu
Ukukrola isixhobo sokuChola seMarble
Chisel kunye nePunch
Chisele i-SDS Max
I-SDS kunye neChisel Point kunye neFlat & Gouge ...